Tolle Zitate Glück Und Glücklich Sein - Kostenlose Ausmalbilder
Mitanisa fahasambarana ary mifalia
Miaraka aminay no ahitanao ny teny faran'izay tsara indrindra, teny sy fahendrena momba ny fahasambarana sy ny fahasambarana.
Teny nalaina momba ny fahasambarana sy ny fifaliana
Voalahatra araka ny abidia ary aseho mazava ho anao. Ireo teny nindramina hitanay dia mety ihany koa ho lahatsoratra fiarahabana amin'ny karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Teny nalaina momba ny fahasambarana sy fahasambarana - © Alliance / Adobe Stock
Mikaroha amin'ny alàlan'ny topy maso ny teny miisa tsara momba ny fahasambarana. Vakio ny fahendrena tsara tarehy avy amin'ireo mpanoratra isan-karazany amin'ny vanim-potoana samihafa.
Izay mampihorohoro ny fanahy rehetra dia fahasambarana. Arthur Schnitzler
Tafiditra amin'ny famoronana oram-baratra koa ny rahon'ny fahasambarana. Anton Philipp Reclam
Eto amin'ity tontolo ity ny antsasaky ny fahasambarana dia fahasambarana tsy fahita firy. Emanuel Wertheimer
Ny fahasambarana dia tsy hoe afaka manao izay tianao ianao fa mila izay tianao foana. Leo Tolstoy
Ny fahasambarana amin'ny fiainanao dia miankina amin'ny toetran'ny eritreritrao. Ny fiainantsika dia vokatry ny eritreritsika. Marc Aurel
Ny fahasambaran'ny olombelona dia midika hoe: tiako izany. Ny fahasambaran'ny vehivavy dia midika hoe: maniry izy. Friedrich Nietzsche
Ny fahasambaran'ny fiainana mavitrika dia mitoetra amin'ny asan'ny fahendrena izay itondran'ny olona ny tenany sy ny hafa. Thomas Aquinas
Ny fahasambarana dia manome be loatra ny maro, nefa tsy ampy ny iray. Marcus Valerius Martial
Jamba ny fahasambarana. Marcus Tullius Cicero
Tsy zavatra mora ny fahasambarana. Tena sarotra ho antsika ny mahita azy amin'ny tenantsika fa tsy amin'ny toeran-kafa. Nicolas Chamfort
Ny fahasambarana dia tsy ivelantsika ary tsy amintsika, fa ao amin'Andriamanitra, ary rehefa hitantsika izany dia eny rehetra eny. Blaise Pascal
Tsy afaka manao fahasambarana ianao, mila manaiky azy rehefa tonga, fa ampiasao ara-dalàna. Wilhelm Heinse
Ao amintsika ny fahasambarana, fa tsy amin'ny zavatra. François de La Rochefoucauld
Ny fahasambarana dia mitoetra tsy amin'ny fifalian'ny fitiavana ihany, fa amin'ny firindrana ara-panahy lalina koa.
Ny fahasambarana mankafy anao indrindra dia mety hamitaka anao. Franz Kafka
Kanosa ny fon'ny olombelona ary mila herim-po vao sambatra. Arthur Maria Freiherr von Lüttwitz
Tsy fantatra ny fahasambarana tanteraka. Tsy natao ho an'ny olombelona izy io. Voltaire
Ny olona dia tsy mahazo miaro ny fahasambarany amin'ny heloka. Manisa Vittorio Alfieri
Satria inona no tena izy? Momba ny fahasambarana. Avy eo inona no olana na hendry na adala ny olona? Voltaire
Ny tampon'ny fahasambarana dia ny fampitsaharana ny fiezahana hahita fahasambarana. Dschuang Dsi
Ny lehilahy dia mankafy ny fahasambarana tsapany, ny vehivavy ny fahasambarana entiny. Pierre Choderlos de Laclos
Ny làlana mankany amin'ny fahasambarana dia tsy manahy na inona na inona tsy takatry ny saintsika. Epictetus
Ny làlana mankany amin'ny tena fahasambarana dia mitoetra amin'ny fotoana. Ohabolana alemanina
Ny ankamaroan'ny olona dia manodidina ny falifaly araka ny itiavany azy ireo. Abraham Lincoln
Ny filàna mitady ny tena fahasambarana no fototry ny fahalalahana. John Locke
Tsy misy izay mampanakaiky ny olona any an-danitra mihoatra ny mampifaly ny olona. Marcus Tullius Cicero
Fotoana iray misy fahasambarana mihoatra ny an'arivony taonan'ny laza. Frederick the Great
Ny fahalavoana lalina dia matetika mitarika fahasambarana ambony. William Shakespeare
Alao amin'ny sidina ny fahasambaran'ny fiainana: tsy hiverina io. Friedrich von Bodenstedt
Iray fotsiny ny hadisoana voajanahary ary isika dia ao mba hahasambatra
ho ch. Arthur Schopenhauer
Tsy misy maharikoriko kokoa noho ny adala vintana. Marcus Tullius Cicero
Ny finamanana sy ny fitiavana dia mamorona ny fahasambaran'ny fiainan'olombelona toy ny molotra roa ny oroka izay mahafaly ny fanahy. Friedrich Hebbel
Ny fahasambarana dia ny fahatsapana ny fahasalamana izay azo avy amin'ny fijerena ny fahorian'ny olon-kafa. Ambrose Gwinnett Bierce
Mampidi-doza kokoa amin'ny olona ny fahasambarana noho ny tsy fahasambarana; mitazona azy ho mailo hatrany izany, izay mahatonga azy tsy hiraharaha. Charles de Secondat
Ny vintana dia anarana hafa ananan'ny finiavana. Ralph Waldo Emerson
Ny fahasambarana dia tsy inona fa ny fahafaham-po amin'ny tenan'ny tena ihany. Giacomo Leopardi
Ny fahasambarana dia tsy hoe tsy misy fiadanam-po. Adolf Muellner
Fifaliana sy vera, tsy ho ela dia ho tapaka! Publilius Syrus
Tsy an'ny rehetra ny maka fahasambarana. Aristote
Tsy misy andriamanitra sy mpanjaka afaka mampifaly anao raha tsy vitanao izany. Karl Julius Weber
Ny falifaly dia manana toetra tsara. Marc Aurel
Sambatra izay sahy miaro izay tiany amin'ny fahasahiana. ovid
Sambatra izay mahatsapa ny tenany eo amoron'ny hantsana ary misoroka ny fahalavoana! Jean-Jacques Rousseau
Sambatra noho ny sambatra indrindra ny olona afaka mampifaly ny olon-kafa.Alexandre Dumas d. Ireo tanora kokoa
Ny fahalehibeazana, ny fahaizana tsara, ny maha-tsara tarehy dia tsy ampy ho an'ny olona, ​​te ho sambatra koa izy ireo. Mathilde Wesendonck
Ny fahasambarana lehibe indrindra eto an-tany dia ny mizara alina manelanelan'ny vehivavy tsara tarehy sy ny lanitra tsara tarehy. Napoleon Bonaparte
Ka raha nifidy ny fahasambarana ho Tomponao ianao dia maneke ny faniriany. Boethius
Heveriko fa ny fahasambarako dia mitoetra amin'ny fanantenana fa ho tanteraka ny faniriako. Paula Modersohn-Becker
Ny kintan'ny fahasambarantsika dia mitoetra ao anatintsika. Heinrich Heine
Afaka ny ho sambatra ny olon-drehetra raha te hanao izany! Franz Grillparzer
Tsy misy adidy atao ambanin-javatra toy izany fa adidy ho faly sy afa-po. Robert Louis Stevenson
Ny fahasambarana tonga miadana dia mirona maharitra ela indrindra. Saadî
Tsy sambatra irery ianao. Wilhelm Ludwig Wekhrlin
Faly fotsiny ianao noho ny zavatra tsapanao fa tsy ny maha-ianao anao. Sully Prudhomme
Tokony hino ny olona fa ny fahasambarana dia azo atao mba hahasambatra azy. Leo Tolstoy
Miaraka amin'ny fifaliana amin'ny fahasambarana, mitombo ny fanaintainan'ny fahaverezana. Pliny ilay tanora kokoa
Tsy misy taona faingana toy ny fahasambarana. Oscar Wilde
Tsy misy mangidy kokoa noho ny mahita fa ny ezaka mahery noho ny olombelona dia miteraka fahasambarana kely fotsiny. Irène Némirovsky
Mandehandeha amin'ny fahasambarana, potiky ny hantsana miafina ny fahaizan'olombelona. Aeschylus
Vao avy tamin'ity ora ity isika. Ary ora iray rehefa falifaly izy dia be dia be. Theodor Fontane
Matokia ny vintanao - dia hahasarika anao izany. Lucius Annaeus Seneca
Ireo izay mahita fahasambarana amin'ny nofy ihany dia tsy mifanaraka amin'ny tena fifaliana. Johann Nepomuk Nestroy
Ireo izay tsy afaka mandà ny tenany fampiononana dia tsy hahita fahasambarana mihitsy. Marie von Ebner-Eschenbach
Akory ny haben'ny ampy hampifaliana antsika rehefa mahatsapa fa mendrika izany isika. Mark Twain
Tsy maintsy manana herim-po hahasambatra isika. Henri-Frédéric Amiel
Fantatsika fa ny fahasambarana ananantsika amin'ny lainga dia tsy fahasambarana marina. Heinrich Heine
Ario ny ziogan'ny be loatra, manankarena tsy misy vola, dia ho faly ianao. François Fénelon
Faly izahay manampy fanampiny tsara tarehy momba ny fahasambarana sy fahasambarana amin'ny fanangonana ny teny nalaina.
Fahasambarana pejy fandokoana - milamina ny zava-drehetra
Pejy fandokoana faly afa-po | Fihetseham-po
Snuggly sy Yawny - Faly aho, sa tsy izany?
Boky fandokoana fitiavana & fitiavana
Snuggly sy Yawny - Miaraha
Meteza ho ray aman-dreny, mitoera ho mpitia | Fampianarana fiaraha-miasa